Ngwaahịa zuru ezu nke nyocha ahụike Nitrile Glove Production Line
Uwe aka emeputara na usoro mmeputa nwere ike kewaa uzo abuo: agba okike na agba. Agba ndị ahụ gụnyere ọcha, acha anụnụ anụnụ, cobalt blue, purple blue, pink, odo na agba ndị ọzọ. The eke agba bụ isi na agba nke ngwaahịa, na ndị ọzọ na agba masterbatch na agba dị iche iche na-ewetara agba dị iche iche. Banyere ngwaahịa ikpeazụ, enwere ike gbanwee ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, gụnyere nha, nha, ibu, agba, wdg.
Echiche echiche nke nyocha Ahụike Nitrile Glove Production Line
Emezila teknụzụ nke usoro mmepụta nitrile glove ngwa ngwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịmụta teknụzụ dị elu site na Malaysia na Germany, anyị na-ewepụtakwa ihe ọhụụ. N'oge gara aga, ọ bụ otu usoro ịkpụzi aka nọchiri anya ya. Ọ bụ ezie na mmepụta ahụ kwụsiri ike, mmepụta ya dịtụ ala. Site na-aga n'ihu experimentation, anyị ụlọ ọrụ emeghewo mmepụta akara nke abụọ n'aka ebu technology. Dị ka onye nnọchianya nke nkà na ụzụ ọhụrụ, mmepụta arụmọrụ anyị abawanyela nke ọma, anyị nwere uru ndị na-abịanụ n'oge na-adịghị anya dị ka ndị bịara ọhụrụ.
Nhọrọ usoro mmepụta
Production akara: ngwaahia imewe nke dị iche iche ahịa na dị iche iche osisi.
Ike: Dị ka osisi, chepụta mmepụta akara jirichaa na mmepụta ikike.
Ike: Jiri ike ime obodo kachasị baa uru ma kwadebe akụrụngwa dịka ike iji bulie ego echekwara.
Usoro mmepụta na-aga
A na-ejikarị nyocha ọgwụ nitrile glove emepụta akara iji mepụta gloves nyocha nyocha ọgwụ, nke a na-ejikarị na nyocha ndị na-abụghị nke ịwa ahụ, dịka ndị ọrịa, ndị dọkịta, na nyocha ụlọ nyocha oge niile.
Nke gara aga: Sterilization ọkwa nitrile uwe mmepụta akara
Osote: General nnyocha nitrile uwe mmepụta akara
Disposable Nitrile Aka Production Line
Ọrụ aka Ntinye Aka
Medical Nitrile uwe Production Line
Nitrile Glo Dipping Machine
Ngwaọrụ Igwe Nitrile